Olee otú Iji Mee swiiti igbe na Crepe Akwụkwọ N'ihi na Nnọkọ Oriri na Ọ Ceụ |ụ | Crafts Na
Otu esi eme igbe candy na akwukwo crepe maka ndi ozo na ememe
Irene Gil | | Crafts, Ọrụ nka, Crafts na ihe, Nzughari
Na nke a nkuzi M na-akụziri gị ime ụfọdụ ato uto o igbe swiiti dị mfe ma dị ọnụ ala. Mụaka nwere ike inyere anyị aka ime ka ha sonye na ịkọwapụta nkọwa nke ha Bọchị ọmụmụ o Udo. Anyị ga-emekwa ka ha mata mkpa ọ dị imeghari ebe ọ bụ na anyị ga-eji ihe ndị ọzọ mepụta igbe swiiti ahụ.
1 Ihe onwunwe
Ime ihe ato uto o igbe swiiti ị ga-achọ ihe ndị a ihe:
Akara katọn nke akwụkwọ mposi ma ọ bụ akwụkwọ kichin
Nrapado dị ka silicone, ọcha gluu ma ọ bụ mama osisi
Crepe akwụkwọ nke na agba na ị chọrọ gị na ato uto
Edere akwụkwọ na ebumnuche kachasị amasị gị
Iji malite ime ihe nhicha nara katọn ọkpọkọn. Ọ bụrụ na ọ bụ tube tube akwụkwọ ahụ, bee ya nha na ịchọrọ ka ọ ghara ịdị ogologo. I kwesiri igbutu ibe crepe akwụkwọ buru ibu karịa kaadiboodu kaadiboodu, na-esi na nsọtụ abụọ pụta sentimita anọ ma ọ bụ ise.
Ghichaa mpempe akwụkwọ crepe gburugburu kaadiboodu kaadi, kpuchie ya kpamkpam ma hapụ tube ahụ n'etiti. N’iburu n’uche na igbe ndị a na-atọ ụtọ ka emebere iji nye dị ka onyinye na a party o usọrọ ndị ọbịa ahụ, ọ ga-abụ na anyị ga-eme ọtụtụ n'ime ha, yabụ ihe kachasị mma bụ ịrapara akwụkwọ ahụ silicone na-ekpo ọkụ, ebe ọ bụ na ọ na-agbaso ozugbo, n'ụzọ dị otú a, anyị ga-echekwa oge dị ukwuu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ha ụmụaka enyere gị aka na usoro ahụ ma ịchọrọ iji nrapado ọzọ nke ha na-enweghị ike ire ọkụ, ịnwere ike iji gluu ọcha ma ọ bụ mkpịsị ọcha.
Tinye candies, ato uto, chọkọleti ma ọ bụ ihe ụtọ ọ bụla tupu ị mechie ya, ma mgbe inwere ha n'ime, tụgharịa na nsọtụ akwụkwọ crepe ma tụgharịa ha, hapụ ya ka a ga-asị na ọ bụ spinning swiiti. Ekele maka njirimara nke akwụkwọ a, ị gaghị enwe nsogbu na imeghe ya, ebe ọ ga-agbakọta dị ka ị si ahapụ ya.
Iji icho mma ya a bit, bee a warara nke patterned akwụkwọ onye ndò ya na usoro ya kwekọrọ na agba nke nnukwu swiiti ị mepụtara. Debe ya n'etiti ihe mkpuchi ahụ na nrapado ma ị ga-emecha swiiti gị. Zuru okè n'ihi ụbọchị ọmụmụ, oriri, nwa ịsa ahụ… Mee ya na agba ị chọrọ, ebe ọ bụ na a ga-ahụ ọtụtụ akwụkwọ crepe n’ọtụtụ ndo dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts na ihe » Otu esi eme igbe candy na akwukwo crepe maka ndi ozo na ememe
Supermarket Bookmarks na Osisi Osisi
Pensụl njide maka ụmụaka ji eva ma ọ bụ fomy roba